हामीले ‘सपेरो’ लाई पो प्रधानमन्त्री बनाएछौं ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
श्रमिकलाई वेवास्ता गर्दै सरकार
सरकारको ध्यान कता ?
छ महिना लामो लकडाउन थप्ने बाहेक श्रमिककका पक्षमा सरकारले केही गरेको छैन। महामारीका बेला सत्तारुढ नेकपामा शक्तिको लफडा भयो। कामकुरो एकातिर छोडेर उनीहरु भागवण्डामा लडे। पार्टी फुटाउनेसम्मका तयारी भए। भागवण्डा मिलेपछि लफडा हाललाई मथ्थर भएको छ। तर सकिएको भने छैन। उनीहरुको ध्यान कता छ त ? महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं हिनामिनाका खबर आए । रेलमार्गका नाममा अर्बौका ठेक्का दिन चलखेल भयो ।
महामारीकै बीचमा सरकारले नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नाममा खुलेको ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई सर्प पाल्न भन्दै ७२ करोड छुट्याएको छ। प्रतिष्ठानले सर्लाहीको लालबन्दीमा साढे ८ विघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्ने भएको छ ।
सर्प पाल्न एवं एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन परियोजनाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश २ सरकार र लालबन्दी नगरपालिकासँग प्रतिष्ठानले ७२ करोड रुपैयाँको परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।
प्रतिष्ठानले सर्प पालन र एन्टी भेनम उत्पादन परियोजनाका लागि लालबन्दी नगरपालिका, प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारसँग ७२ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा संस्थाले साढे ८ विघा जग्गा खरीद गरेर त्यहाँ विषालु सर्प पाल्ने तयारी अगाडि बढाएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी बताउँछन्। २०७१ सालमा ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को स्थापना भएको थियो।
फुड बैंक रोक्न प्रशासनको दबाब
देशका विभिन्न स्थानमा मनकारीहरुले कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्ले स्थापना गरेका फूड बैंक ।
देशका विभिन्न ठाउँमा हुनेले दिने नहुनेले लिने भन्दै फुड बैंकहरु स्थापना भएका छन्। कतिपय ठाउँमा मानिसहरुले स्वतः रुपमा खानाको व्यवस्था गरेका छन्। जसले अलिकति भए पनि केही मानिसलाई दुई छाक टार्न सहयोग गरेको थियो। तर ललितपुरमा सञ्चालित फुुड बैंक रोक्न प्रशासनले दबाब दिएको छ। ललितपुर क्षेत्र नं १ मा सञ्चालित फुड बैंक बन्द गर्न प्रशासनले अवरोध र्पुयाएको आयोजक तरुण दलले जनाएको छ । १० दिन देखि सञ्चालनमा आएको फुड बैंकले काम नपाएर भोकै रहेका श्रमिकलाई राहत दिइरहेको थियो। ताहाखेलमा सञ्चालित फुड बैंकबाट दैनिक दुई सय बढीले राहत पाइरहेका थिए ।
यो महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको खबर श्रमिकको कानमा पनि पर्यो होला। नेकपा विवादको रोइलो उनीहरुले चाल पाए होलान् । अझैं सर्प पाल्न ७२ करोडको बजेट दिइएको बारे पक्कै उनीहरु बेखर छैनन् होला। जसले पेटभरि खान पाएका छैनन् । भााडा तिर्न नसकेर घरबेटीले निकालेर सडकमा बास बस्न बाध्य छन् । दिनभरि खानाको खोजीमा हिड्दा प्रहरीेको लठ्ठी भेट्छन्। उनीहरुले यी खबरबारे के सोच्दा हुन? ‘हामी यता भोकै मर्ने अवस्थामा छौं, सरकार उता सर्पलाई ७२ करोड खुवाउँदैछ।’
सरकार बास्तवमा कसको? श्रमिकको त पक्कै होइन। अनि उनीहरु भन्दा हुन् ‘हामीले सपेरालाई सरकारमा पठाएछौं।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, भाद्र २२ २०७७ १९:३४:३६